Askar Ka Tirsan Dowlada Sacuudiga Oo La Dilay. – Bogga Calamada.com
Askar Ka Tirsan Dowlada Sacuudiga Oo La Dilay.
Laba Askari oo ka tirsanaa Ciidamada Ammaanka ee Nidaamka Aala Sacuud ayaa dhintay, dhowr kalena way dhaawacmeen kadib markii rag hubeysan ay rasaas ku fureen goob ay Ciidamadu ku sugnaayeen oo ku taalla magaalada Damaam ee bariga Wadankaasi.
Afhayeenka Ciidamada Bileyska ee gobollada bariga dalka Sacuudiga ayaa sheegay in Weerarkaasi uu dhacay Saqdii dhexe ee xalay abaare 12:00 habeenimo, isagoona tibaaxay in xilli ay Ciidamadu joojiyeen gaari marayay Xaafadda Al-dabaab inay la kulmeen rasaas xooggan oo lagu soo furay, taas oo sababtay dhimashada laba Askari oo Booliis ah.
Wuxuu tilmaamay Afhayeenku, in Kooxaha Booliiska ee qaabilsan baaritaannada falal dembi dambiyeedyada inay ku daba jiraan cidda ka dambeysay weerarkaasi, balse ma sheegin cid illaa iyo hadda ay Ciidamada Ammaanku ay usoo xireen Shilkaasi khasaaraha Nafeed dhaliyay.
Goor sii horreysay, Warbaahinta ka howl gasha Dalka Sacuudiga ayaa sheegay in weerarka hubeysan ay fuliyeen Seddax Nin oo Wejiyada soo xirtay, kuwaas oo rasaas oodda uga qaaday Koox ka tirsan Ciidamada Bileyska oo ku sugnaa bariga magaalada Damaam.
Weerarkan waxa uu noqonayaa kii labaad ee muddo laba bilood gudahood ah ka dhaca magaalada Damaam ee dalka Sacuudiga, iyadoona gobollada dhaca bariga dalkaasi ay bilihii lasoo dhaafay ka dhacayeen weerarro hubeysan oo ay geysanayeen kooxo hubeysan oo aan heybtooda la aqoonsan.
Shantii bishan October, Ciidamo roondo ah oo Bileyska ka tirsan ayaa lagu weeraray Gobolka Al-Qadhiif ee bariga dalka Sacuudiga, inkastoo aan la sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkaasi.
17-kii Bishii September ee aan soo dhaafnay, laba ka tirsan Ciidamada Ammaanka ee Nidaamka Aala Sacuud ayaa lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Damaam.
Gobolka Al-Qadiif waxaa ku xooggan Shiicada Rawaafidda ah ee looga tira badan yahay dalka Sacuudiga, iyadoona dhowrkii sano ee lasoo dhaafay Shiicadu ay sameeyeen isku soo baxyo rabshado wata oo ay uga soo horjeedaan Nidaamka Aala Sacuud ee ka taliya dhulkaasi.